ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန်ခဲ့သည်မှာ (၂)နှစ်ကျော်သွားပေမယ့်လည်း တစ်ရက်မှမမေ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ ၀ါဝါ၀င်းရွှေ – Cele Snap
September 24, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝါရင့် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးကြီး ဝါဝါဝင်းရွှေကတော့ အခုထက်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ရရှိထားဆဲပါပဲနော်။ အနုပညာအမွေတွေကိုလည်း သူမရဲ့မြေးမလေးတွေကို ပေးထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ အခုမှာလည်း ကွယ်လွန်သွားတာ ၂ နှစ်နဲ့ ၂ လပြည့်သွားတဲ့ ခင်ပွန်းကို အရမ်းသတိရနေကြောင်း ရင်ဖွင့်လာခဲ့ပြန် ပါပြီနော်။
” လွမ်းရတဲ့ည ​​ပေါင်း ၂ နှစ် နဲ့ ၂ လ ကို​ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါပြီ ဒယ်ဒီ ​ရေ အ​မှောင် ည ကို​ရောက်မှာ​ကြောက်ပါတယ်လမိုက်ညတစ်ညမှာ တို့ကိုထားပြီး အ​ဝေး ကို ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်ဒယ်ဒီကို ပြုစုချင်ပါ​သေးတယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒယ်ဒီက​တော့ မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခု မှာလွတ်လပ်​ပေါ့ပါးစွာ ​ရောက်​နေပြီမို့​ကျေနပ်မိရပြန် ပါတယ်
နှစ်စဉ် လစဉ် ​နေ့စဉ် နေ့တိုင်းပြုလုပ်ခဲ့ ပြုလုပ်ဆဲ ကုသိုလ်​တွေကိုဒယ်သာဓု ​ခေါ်​နေမှာပါ။ တို့က​တော့ ဆက်၍ဆက်ခါ လွမ်းရတဲ့ည​ပေါင်းများစွာကို​ကျော်ဖြတ်ရအုံးမှာပါ​လေ ” လို့ ရေးထားပါတယ် ပရိ သတ်ကြီးရေ….
ပရိသတျကွီးရေ ဝါရငျ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးကွီး ဝါဝါဝငျးရှကေတော့ အခုထကျထိ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို သိမျးပိုကျရရှိထားဆဲပါပဲနျော။ အနုပညာအမှတှေကေိုလညျး သူမရဲ့မွေးမလေးတှကေို ပေးထားခဲ့တာ ဖွဈပါ တယျနျော။ အခုမှာလညျး ကှယျလှနျသှားတာ ၂ နှဈနဲ့ ၂ လပွညျ့သှားတဲ့ ခငျပှနျးကို အရမျးသတိရနကွေောငျး ရငျဖှငျ့လာခဲ့ပွနျ ပါပွီနျော။
” လှမျးရတဲ့ည ​​ပေါငျး ၂ နှဈ နဲ့ ၂ လ ကို​ကြျောဖွတျခဲ့ရပါပွီ ဒယျဒီ ​ရေ အ​မှောငျ ည ကို​ရောကျမှာ​ကွောကျပါတယျလမိုကျညတဈညမှာ တို့ကိုထားပွီး အ​ဝေး ကို ထှကျခှာသှားခဲ့တယျဒယျဒီကို ပွုစုခငျြပါ​သေးတယျ။ ဒါ​ပမေဲ့ ဒယျဒီက​တော့ မွငျ့မွတျတဲ့ဘဝတဈခု မှာလှတျလပျ​ပေါ့ပါးစှာ ​ရောကျ​နပွေီမို့​ကနြေပျမိရပွနျ ပါတယျ
နှဈစဉျ လစဉျ ​နစေ့ဉျ နတေို့ငျးပွုလုပျခဲ့ ပွုလုပျဆဲ ကုသိုလျ​တှကေိုဒယျသာဓု ​ချေါ​နမှောပါ။ တို့က​တော့ ဆကျ၍ဆကျခါ လှမျးရတဲ့ည​ပေါငျးမြားစှာကို​ကြျောဖွတျရအုံးမှာပါ​လေ ” လို့ ရေးထားပါတယျ ပရိသတျ ကွီးရေ….
သူတို့အနုပညာရှင်တွေကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေအား ပြတ်ပြတ် သားသားပြောလိုက်တဲ့ ကျော်ထက်အောင်